मोबाईल खोसे पछि हात का,टेर तेस्तो भएको हो भन्दै ह्जुर बुवा मिडिया मा – Namaste Host
April 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on मोबाईल खोसे पछि हात का,टेर तेस्तो भएको हो भन्दै ह्जुर बुवा मिडिया मा
अन्य समाचार काठमाडौं । संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, धनी बन्ने,, पैसा कमाउने पैसा कसरी कमाउने ? सुख सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् । कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाएका हुन्छन् । तर त्यसले उनीहरुलाई शान्ति भने मिल्दैन । जति पैसा कमाउन थाल्यो तेतिनै तनाब थपिदै जान्छ।
हजुरबुबाले करनी गरेपछि आ’त्मा ह,त्या
खुशिको खबर देशैभरिका शिक्षकहरुका लागि आयो अत्यन्त जरुरी सूचना ! सबैले पढ्नै पर्ने
March 14, 2021 March 14, 2021 Bijay Lama